အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ စည်းကမ်းတွေ ထပ်တင်းကြပ်လိုက်ပါပြီ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ စည်းကမ်းတွေ ထပ်တင်းကြပ်လိုက်ပါပြီ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ စည်းကမ်းတွေ ထပ်တင်းကြပ်လိုက်ပါပြီ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး
Posted by Good Idea on Jun 18, 2011 in Aha! Jokes, Satire |7comments
…”လူတွေကအားအားယားယား အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်ပြီး ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း နုတ်တွေရေး ချက်တင်တွေ ထိုင်နေကြလို့ ကီးဘုတ်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ရတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁တုန်းကတော့ ပုံတွေတင်လို့မရအောင် USB တို့ cd တွေပိတ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ စကားပြောလို့ မရအောင်လည်း မိုက်တွေမထားဖို့ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါသေးတယ်”
(Kaung Myat Min ၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ဟုတ်မှမဟုတ်တာ ဖောပြန်ပြီ …….တကယ်အင်တာနက်ဆိုင်များဖွင့်ထားတဲ့လူတွေများပြောသလား
ဒီသတင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၂၀၁၃ ကျရင် မြန်မာနိုင်ငံက အရမ်းခေတ်မီတိုးတက်လာပြီး ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ အချိန် ကီးဘုတ် မော်နီတာ မလိုတော့ပါ စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ စာတွေဖတ်လို့ ရေးလို့ ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ…..
ကောင်းတဲ့ Satire, သရော်စာပါပဲ..။
ဒါပေမဲ့.. သတင်းမဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါကြောင့် Category ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကျနော်ကြားတာ ခိုးကူးဆော့ဝဲ ဆင်ထားတဲ့ စက်တွေအားလုံး အသိမ်းခံရမယ်ပြောတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် သူဌေးဘီလ်ဂိတ်နဲ့ ဦးတေဇ ပေါင်းရိုက်တာတဲ့။
ကျုပ်က တောသားမို့ မသိလို့ဝင်မေးပါရစေ။
အဲဒီဦးတေဇဆိုတဲ့ လူကြီးကကော ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်တယ်လို့ ရှိဘူးလို့လား။
မလိုတဲ့သူတွေပြောတာတော့ ပြည်တွင်းရှိသမျှ အကုန်အလကား ယူသုံးနေတာဆို။
နောက်ဆုံးရ သတင်းများအရ အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် သုံးစွဲသူများ လုံခြုံရေးအရ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလျှင်
ရဲသားလုံခြုံရေး တစ်ဦးစီ စောင့်ကြပ်ခိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် လက်ညောင်းသက်သာစေရန်
၄င်း၊ မျက်စိညောင်းသက်သာစေရန်၎င်း နိုင်ငံတော်အစိုးရက စေတနာ ပလပွ နှင့် ထောက်ပံပေးမည် ဟုသိရပါသည်။ ၄င်းအပြင် အများပြည်သူတို့ အိမ်အပြန် အဆင်ပြေစေရန် အင်တာနက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ခြင်းစီအတွက် ဖယ်ရီ ကား အပြာကြီးများ တစ်စီးစီ ထောက်ပံ မည် ဟူသတတ်။